मलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याइयो - डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीले शिक्षण अस्पतालमा पुगेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा केसीले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले क्रुरतापूर्वक आफ्नो इच्छा विपरित अपहरणको शैलीमा जुम्लाबाट काठमाडौं
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा गम्भीर घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी जवान कमल शर्मा उपाध्यायलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । घाइते कमललाई फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरबाट